Maraykanka oo ciidamo cusub oo Komaandoos ah u tababaraya dalka Somalia | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maraykanka oo ciidamo cusub oo Komaandoos ah u tababaraya dalka Somalia
Maraykanka oo ciidamo cusub oo Komaandoos ah u tababaraya dalka Somalia
(Muqdisho) 13 Jan 2021 – Dalka Maraykanka ayaa sheegay inuu sii wadayo welibana kordhinayo tirada Ciidanka Komaandooska Danab ee dalka Somalia oo uu isagu tababaro.
Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Somalia, Xasan Xuseen Xaaji, oo uu welhiyo taliye ku xigeenka taliyaha ciidanka xoogga dalka Somalia, Jeneraal Cabaas Amiin, ayaa waxay kulan la qaateen saraakiil ka tirsan hogaanka Taliska Ciidamada Mareykanka ee Somalia.
Labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dhinac iyo sidii dowladda Mareykanku u xoojin lahayd tababarrada la siiyo Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska Danab oo door wayn ka qaata la dagaallanka kooxda Shabaab.
Warkan ayaa kusoo beegmaya jeer uu MW Maraykanku amray in ciidankiisa laga saaro Somalia, iyadoo durba ay bilaabatay daad gurayntooda, balse Maraykanka ayaa horay u sheegay in aanu joojin doonin howlaha uu ka wado Somalia, waxaa sidoo kale aanu meesha ka saarin inuu soo celiyo ciidanka yar ee awal ka joogey Somalia oo u wareegaya Kenya iyo Jabuuti.
Previous articleGOOGOOSKA & SAWIRRADA: AC Milan vs Torino 0-0 (5-4), Burnley vs Man United 0-1 (Milan oo 8-da timid)
Next articleItoobiya oo digniin culus u dirtay dalka Suudaan & dagaal furan laga cabsi qado + Jawaabta Suudaan